Fadin-tseranan'i Espaina | Vaovao momba ny dia
Fomba amam-panao espaniola
Maria | | kolontsaina, España
Tamin'ny taona 60, ny governemanta Espaniola dia namorona hetsika fampielezana fizahan-tany mba hisarihana ireo mpitsidika an'i Espana izay nanararaotra ilay klise vahiny izay nitondra ny firenena ho toerana mitokana misy fomba amam-panao mahafinaritra: Hafa ihany i Espana!
Ny marina dia, na dia manana fitoviana ara-kolontsaina marobe amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy avaratra aza isika Manana fomba amam-panao tena miavaka izay mampiavaka ny kolontsainay tsy ampoizina ataon'ny any ivelany isika. Inona no tena manaitra?
1 Ora farany
2 Bar sy tapas
5 Manaova jamba
6 Taom-baovao Espaniola
7 Ny birao
Mifoha maraina ny Espaniola fa matory aoriana kelin'izay eropeana hafa. Matetika ny olona eny an-dalambe dia feno olona hatramin'ny alina be satria lava be ny ora fivarotana sy ny bara. Ao afovoan-tanàna lehibe dia hahita olona marobe foana ianao na oviana na oviana ny andro.
Ary koa, ny fotoana fisakafoana dia avy eo. Na eo aza ny zava-misy fa maraina be dia be ny maraina, ny Espaniôla matetika dia misakafo sy misakafo eo anelanelan'ny roa sy telo ora taty aoriana noho ny any Eropa. Tsy manadino ny sakafo atoandro, izay atao amin'ny mitatao vovonana alohan'ny sakafo lehibe, sy ny dite atoandro, tsakitsaky nalaina alohan'ny sakafo hariva.
Bar sy tapas
Ny iray amin'ireo singa mampiavaka ny gastronomy espaniola dia ny tapas. Tapas dia sakafo kely izay aroso miaraka amin'ny fisotroana ao anaty bara. Any Espana dia mahazatra be ny mandeha miaraka amin'ny namana ho an'ny tapas, izay misy ny mandeha isaky ny bar ka mihinana sy misotro, mazàna labiera na divay iray vera.
Ny fiheverana ny tapas dia zavatra manaitra ny vahiny matetika satria tsy zatra mihinana sy misotro mijoro ao anaty bara feno olona ary manao lalana mamaky ireo bar malaza indrindra. Na izany aza, raha vao manandrana izany izy ireo dia tsy mila zavatra hafa.
Any Espana dia mahazatra ny miarahaba ireo namana sy olon-tsy fantatra amin'ny oroka roa eo amin'ny takolaka, zavatra izay tsy mitranga any amin'ny firenena eropeana hafa ary amin'ny voalohany dia toa somary hafahafa ihany izy ity nefa eto amin'ity firenena ity dia mahazatra ny fifandraisana ara-batana.
Ny siesta, fotoana kely fatoriantsika aorian'ny fisakafoanana ary ahafahantsika mameno ny baterintsika hiatrehana ny andro sisa, dia fomba fanao Espaniôla izay lasa malaza be amin'ny vahiny. Voaporofo ara-tsiantifika ny fikotranana mba hanatsarana ny fahasalamana sy ny fivezivezena ary hisorohana ny adin-tsaina.
Zavatra manaitra ny vahiny matetika rehefa tonga any Espana izy ireo dia fanaon'ny manao jamba amin'ny trano rehetra. Any amin'ireo firenena avaratr'i Eropa, izay manam-potoana kely amin'ny masoandro, dia manandrana manararaotra hazavana betsaka araka izay azo atao izy ireo ary tsy manao afa-tsy lambam-baravarana handrakofana azy io rehefa manelingelina azy ireo izany. Na izany aza, any Espana dia matanjaka ny hazavana, noho izany dia tsy ampy ny manana ambainy fotsiny, indrindra amin'ny fahavaratra. Ho fanampin'izay, manome lamba tsiambaratelo fanampiny amin'ny trano ny takamaso.
Sary | Tena mahaliana
Ahoana ny fomba fandraisana ny Taombaovao any Espana? SAzoko antoka fa efa nandre momba ny voaloboka tsara roa ambin'ny folo ianao. Araka ny fanao mahazatra dia tsy maintsy mihinana azy ireo tsirairay ianao isaky ny mikapoka ny feon-kira manamarika ny sasakalin'ny 31 desambra. Na iza na iza mahavita maka azy rehetra ara-potoana sy tsy mikendaina dia hanana herintaona feno vintana sy fanambinana.
Mihinana aoriana kokoa noho ny eropeana sisa isika ary rehefa tonga eto dia maro ny mpizahatany no mahita fa sarotra ny zatra azy io. Manana fahazarana ihany koa isika ary izany Aorian'ny fisakafoanana tsara dia miala voly eraky ny latabatra miresaka ny espaniôla rehefa mankafy kafe sy tsindrin-tsakafo. Zavatra iray toa antsika ka gaga amin'ireo izay mitsidika anay voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Fomba amam-panao espaniola
Ireo tanàna espaniola 10 manintona mandresy ny Instagram
Cáceres, inona no ho hitanao ao an-tanàna izay hahatonga anao ho tia